China Tractive Sprayer orinasa sy mpamatsy | RY AGRI
RY3W boom sprayer suiable ho an'ny karazana traktera rehetra, azo ampiasaina izy io, fandidiana tsotra, matetika ampiasaina amin'ny famonoana aretina sy bibikely, bibikely ary otrikaina.
1.Pump: karazana diaphragm. Vita amin'ny akora fanoherana ny harafesina. Miaraha miasa amin'ny PTO. Ny tsindry farany ambony dia manome antoka fa ny zavamaniry manaparitaka na dia ny ravina ambany aza.
2.Fifehezana fanerena: Amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny rafitra, ny tsindry tsirairay dia mitazona ny tsindry iray ihany. Hamarino tsara ny habetsahana sy ny kalitaon'ny tsifotra. Mandritra ny fizotran'ny famafazana, ny isan'ny tsifotra dia azo fehezina arak'izay ilaina.
3. Boom: lanja maivana. Tsy misy fihenan-tsasatra / fampiakarana tena, fiakarana mafy. Vy maivana. Miasa amin'ny tany sarotra, izy io koa dia afaka mitazona fanjakana milamina sy avo lenta ary manome sprayer fanamiana amin'ny vokatra manontolo. Ny ampahany lehibe amin'ny fipoahana dia azo afindra amin'ny fitaterana mora. Ny nozera tsirairay dia voasivana amin'ny fantsom-plastika matanjaka, ny elanelana misy eo anelanelan'ny lozis dia azo ahitsy eo anelanelan'ny 15-30 santimetatra, ary ny haavon'ny boom dia azo ahitsy amin'ny tsoraka fanaraha-maso hydraulic tractor.
4.Nozzle: vita amin'ny plastika manokana maharitra. Izy io dia afaka mamokatra rano mitete 100-micron miaraka amin'ny tsindry 40 pounds isaky ny santimetatra toradroa. Izy io dia afaka misoroka ny fikorianan'ny famafazana rehefa mijanona ny paompy, amin'izay dia ialana amin'ny fako,
Fampahalalana momba ny fitaterana
Afaka mitondra an'ity entana ity amin'ny toerana rehetra izy. Noho ny habe sy ny lanjan'ilay entana dia nanoro hevitra anay ny hifandray aminay momba ny fandefasana entana alohan'ny hividianana.
1. Tongasoa OEM Manamboatra: marika mpanjifa, loko ...
2. Sombiny amin'ny tahiry.
3. Hamaly ny fanontanianao mandritra ny 24 ora izahay.
4. Fitsidihana orinasa, fizahana mialoha ny fandefasana, fiofanana ...
Teo aloha: Mpamboly tongolo gasy
Manaraka: Sprayer zaridaina